Mogadishu Journal » Musharaxnimada Xasan Cali Khayre oo Dhalisay Su’aalo badan
Muqdisho:-Ra’iisulwasaarihii hore ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maalintii Sabtiga September 12, 2020 ku shaaciyay bartiisa Twitterka in uu doorashada soo socoto musharrax u yahay madaxtooyada Soomaaliya. Golaha Shacabka ayaa July 25, 2020 kala noqday kalsoonidii xukuumaddiisii xilli dalku u baahan yahay xasillooni siyaasadeed.
Warar laysla dhaxmarayay baraha bulshada ayaa sheegay in Mudane Khayre uu ka cudur daartay inuu ka hormuuqdo xafladdii Hotel Doorbin, haseyeeshee, xeeldheerayaasha arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xafladu ay ahayd mid loo qabanqaabiyay hab qabiil, taas oo khilaafsan mabaad’ida siyaasadda ee uu Khayre damacsan yahay inuu ku tartamo.
Malahaa Mudane Khayre wuxuu saadaaliyay in shirka wadatashiga uu ku dhammaanayo sida ay rabaan maamul goboleedyada, sida ku cad warmurtiyeedkii soo baxay September 17, 2020.
Waxaa muuqata in la gudaggalay ololihii doorashooyinka madaxweynaha iyo golayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (BFS), iyadoo aysan muuqan mucaarad waddani ah oo isku duuban una barbardhigi kara Madaxweyne Farmaajo. Balse, haddii Farmaajo uu ku sii wada siyaasiyiinta ka soo horjeeda riixitaanka, waxaa laga yaabaa inuu ugu dambeynta ku soo dhaweeyn doono Villa Somalia.
Si kasta ha noqotee, booqashadii lama filaanka ahayd ee guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamed Sheikh Cusman Jawaari uu ku tegay guriga Ra’iisulwasaarihii hore Mudane Xasan Cali Khayre ayaa u muuqato mid kordhin doonta su’aalaha siyaasadeed ee aan la ogeyn waxa xigi doona.